Kusuka zviratidzo, unoziva kuzvidudzira | Bezzia
Kusuka zviratidzo, unoziva kuzvidudzira here?
Mhedzisiro yekuisa nguo kuti igezwe usina kumboverenga zita rayo inogona kutyisa. Iwe unogona kunge wakave neanopfuura chiitiko chimwe chakadai, ndizvo here? Teerera kune chakanyorwa uye nzwisisa kuwacha zviratidzo kuti mune izvi vanomiririrwa ndiyo kiyi kuitira kuti zvirege kuitika zvakare.
Ndinofanira kusuka bhurugwa iri pamweroi wekushisa? Ndinogona here kuisa gumbeze iri mu dryer? Iko kushandiswa kwemhepo kunokurudzirwa kunaya juzi rangu nyowani? Zviratidzo zvekuwacha, mapikicha anoratidza kumiririra nzira dzekuwachisa kuwacha, kuomesa nekuayina akakodzera nguo imwe neimwe ndevaya vanogona kupindura iyi nemimwe mibvunzo. Uye kuvanzwisisa kuri nyore kwazvo sezvaungaona pazasi.
Kuita kuti zvive nyore kwauri isu takatoparadzanisa zviratidzo mu kuwacha zviratidzo, kuomesa zviratidzo uye ayina zviratidzo, zvichitevera iwo maitiro echinyakare maitiro anoitwa kusuka nguo uye kuidzosera muwadhiropu. Uye isu takaisawo mavara kuti zvive nyore kwauri kuti uzvizive. Hatigone kuita kuti zvive nyore kwauri.
1 Kushambidza zviratidzo
2 Kuomesa zviratidzo
3 Ironing zviratidzo
Chiratidzo chekushambidza chinomiririrwa se Mugomo uzere nemvura. Iyo pictogram inowanzo sanganisira manhamba kana mapoinzi anoratidza iyo tembiricha yakanyanya panofanira kuwachirwa nguwo uye / kana mitsara yakatwasuka inoratidza kudiwa kwekushandisa chirongwa chakashambidzika chekugeza
Bleaches ivowo chikamu chekushambidza. Izvo zvinhu izvo zvakagadzirirwa kuita kuti tambo dzehembe dzakasiyana dzichene; kugona kuita seichi klorini uye bleach pakati pezvimwe zvigadzirwa zvemakemikari. Chiratidzo, chinomiririrwa kuburikidza netriangle, saka chinoshanda kuziva kana macleach anotenderwa uye kana zvirizvo, ndeipi mhando yema bleach inogona kushandiswa kusuka yataurwa nguo.
Ko kana iwe pachinzvimbo chekutanga wekugeza chiratidzo ukawana denderedzwa? Unoreva kuti chipfeko chinoda a nyanzvi yekugeza Kana nemamwe mazwi, kuti haugone kuishambidza kumba uye zvichave zvakafanira kuti uende nayo kune yakashambidzika yakaoma.
Mucherechedzo wedare rine denderedzwa mukati ndiyo yatinofanira kutsvaga pane zvakanyorwa kuti tizive kana mwenje uchigona kana kusaisa muchomisa. Kana iwe uchikwanisa kushandisa chakaomesa, zvichave zvakare zvakakosha kuti uzive rudzii rwechirongwa uye nepi tembiricha kuti usashatise nguvo.
Iko kushandiswa kwekuomesa mudzimba medu kuri kuwanda uye kuwanda asi kwete mbatya dzese dzinobvumidza iyi mhando yekuomesa. Kune akawanda atinofanira kutevera kuomesa neruoko. Unogona kuvaziva ivo pakanyorwa kuburikidza nechiratidzo chekwere. Mukati meizvi unogona kuwana mimwe mitsara nemakona anomiririrwa kuratidza nzira yakanaka yekuomesa mbatya: patambo, yakatwasuka, mumumvuri ...
Nhanho yekupedzisira usati waisa mbatya dzako muwadhiropu kuayina. Uye zvakare chiito ichi chinomiririrwa pakanyorwa. Izvo zvakare, ine chiratidzo chakajeka, icho cheplate. Uye sekushambidzika, madhiraivha anoshandiswa zvakare pano kuratidza iyo tembiricha yakanyanya iyo yaunofanira kuayina nguo yacho kuti urege kuiparadza.
Izvi ndizvo zvinonyanya kuwachwa zviratidzo, zvakajairika kwauri? Ivo vanoenderana neiyo pictographic system yakagadzirwa nekambani yeFrance Ginetex yekunyora machira muEurope. Mune dzimwe nyika dzepasi macode anogona kunge akasiyana asi haufanire kunetseka! Makambani anosungirwa kutevedzera iyo nyika pachayo hurongwa umo chigadzirwa chichatengeswa.
Kurudziro yedu ndeyekuti kana ukasazviita, bhadhara kutarisa kune zvinyorwa paunotenga nguo itsva. Kudonha murudo nehembe isingaite kwezuva nezuva nekuti zvinoda kushambidzwa kwehunyanzvi kunogona kuita basa mune dzakasiyana kesi. Paunenge uchinge waona nzira chaiyo yekugeza, kuomesa nekuayina iyo, une sarudzo mbiri: bvisa chiraira kana chiri chakajairika kana kuchichengeta kana nguo ichida kutarisirwa chaiko uye haufunge kuti zvinokwanisika kuti urirangarire. Uchatiteerera here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Kusuka zviratidzo, unoziva kuzvidudzira here?
Matipi ekuchengetedza hutano hwemuromo wako
Yakasanganiswa Pumpkin ne Spicy Yogurt Sauce